Sidee si sax ah loogu daraa noocyada kala duwan ee naqshadeynta garaafka? | Abuurista khadka tooska ah
Mid ka mid ah qalabka ay barnaamijyadu siiyaan naqshadeeyayaasha garaafka ayaa ah noocyada kala duwanSi kastaba ha noqotee, qaabka mid waliba u adeegsan doono iyo sida la isugu darayo midba midka kale waxay u noqon kartaa caqabad dhab ah xirfadlaha haddii aysan si sax ah ula tacaalin. waa maxay shaqada farta kasta ay leedahay maxaase sifooyinkiisa ah.
1 Immisa nooc ayaa ku habboon shaqada naqshadeynta garaafka?
2 Sida loo doorto font leh shaqsiyad
3 Kuwani waxay noqon karaan beddelaadyo kaa caawin kara inaad doorato farta labaad:
3.1 Khamaarka aaminka ah
3.2 Sida loo barbar dhigo muuqaal
3.3 Sidee loogu guuleystaa qaababka is-khilaafsan ee websaydhka
Immisa nooc ayaa ku habboon shaqada naqshadeynta garaafka?
Sida caadiga ah, in ka badan saddex nooc ayaa noqon doona mid xad dhaaf ah oo waxaad halis ugu jirtaa inaad lumiso nuxurka farriinta.
Tusaale ahaan, astaan ​​ayaa adeegsata inta u dhexeysa 1 iyo 2 nooc oo kala duwanMidkood waa midka doonaya inuu muujiyo cinwaannada, oo aad sidoo kale kuheli karto midab beddelid ama xoojinta adoo geesinimo leh iyo tan kale oo aad ku kala soocayso inta kale ee qoraalka. Waxa muhiim ah in la ogaado waa taas farta yar ee aad isticmaasho ayaa ka fiican, laakiin tan waxaa lagu daray cunsurro kale oo aan ku burburin doonno halkan.
Markaad horumarinayso a shaqada naqshadeynta, Habka ugu wax ku oolka badan ee lagu doorto farta ku habboon waa iyada oo xoogga la saaro akhrinteeda, tan awgeed, booska aan haysanno, tirada ereyada, aragtida shaqada, iwm waa in la tixgeliyaa; Sidan ayaa aad u kala cadayn doonta haddii muuqaal ahaan haddii isha laga helayaa ay tahay midka la tilmaamay.
Waxaa xusid mudan in marar badan naqshadeeyaha uu is arki karo isaga oo wajahaya baahida macaamil horayba u sii dejinayay nooca font, cabirka farriinta iyo xaddidaadaha kale, ka hor taas oo aan wax badan la qaban karin, in ka badan talooyin dhawr ah iyo xaaladaha ugu fiican in kuwaas lagu xisaabtamo.
Sida loo doorto font leh shaqsiyad
Laba shay oo muhiim ah, waa inaad marka hore soo marto dooro isha koowaad, taas oo sidaan horay u sheegnay, ay tahay in lagu tilmaamo akhrinteeda, ka dibna la doorto font labaad tanna waa loo tixgeliyaa:
Fahmaan in xaraf kastaa leeyahay astaamo u gaar ah oo qofka siinaya, marka la dooranayo farta labaad waa in la hubiyaa inay iyaduna tahay shakhsiyadda qofka koowaad Iyo sida ugu wanaagsan ee loo sameeyo marka loo doorto mid la wadaagaya astaamaheeda; Marka la soo koobo, haddii labada xarfo ay leeyihiin astaamo ay wadaagaan marka la isku daro way tarmi doonaan.
Waa in la tixgeliyaa, maaddaama markii la daawanayo iyaga oo isku jira, ay bixinayaan a fariin muuqaal ah oo isdaba joog ah, Saamiyada, qaababka iyo tirooyinka kuwan waa inay noqdaan kuwo isku eg.
Kuwani waxay noqon karaan beddelaadyo kaa caawin kara inaad doorato farta labaad:
Khamaarka aaminka ah
Ku dhig xarfo kuwaas oo ah loogu talagalay waxyaabo gaar ah oo ka dhexeeya iyo kuwa bixiya waxyaabo aad u khiyaano yar laakiin kufilan muuqaal ahaan, tusaale ahaan, waad dooran kartaa isku dar Meta iyo Meta SerifSida qaababka xarfaha, kuwani waa isku mid.
Sida loo barbar dhigo muuqaal
El adeegsiga isbarbardhiga wajiyada noocyada muuqaalka waa lama huraan in la awoodo in la isbarbar dhigo sifo, haddaba, haddii wejiga warqad loo xusho si jidhkiisu u qumman yahay, in la isbarbar dhigo wejiga shaashadda ka soo horjeedka ah waa in la doortaa, taas oo ah, in aan la akhrin karin.
Waa inaad markasta raadsato muuji wejiga ka soo horjeedka wajiga jirka la xushay.
Sidee loogu guuleystaa qaababka is-khilaafsan ee websaydhka
Halkan waa muhiimad muhiim ah yaqaan sida loo garto astaamaha in loo tixgeliyo inay tahay tan ugu caansan noocyada ugu horreeya ee font ee la xushay, xaqiiqdii, hore ayaannu hore ugu soo sheegnay, laakiin ku saleysan astaamo dhawr ah, nooc labaad oo warqad ah oo la wadaaga astaamahan muhiimka ah waa in la raadiyaa
Tani waxay u baahan tahay xoogaa xoog u nugul xagga naqshadeeyeIn kasta oo qaybta shakhsiga ahi adkaato, haddana si kasta oo hubaal ah, isku-dhafanno asal ah oo cajaa'ib leh ayaa la gaari doonaa, taas oo caqabad ku ah garashada naqshadeeyaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Sidee si sax ah loogu daraa noocyada kala duwan ee naqshadeynta garaafka?